About Us - Huizhou Melikey abicah Product Co., Ltd
Wabenzi IMVELISO abicah
Ukususela ucweyo encinane ukuya mveliso ukungunda, ngoko sagqiba ekubeni ukuyila iimveliso zethu abicah. Thina ezintsha kwezoshishino yorhwebo International, kodwa kufuneka kwiminyaka engaphezu kwama-10 yamava ekwenzeni abicah nokuvunda kwaye bavelisa imveliso abicah. De-2019, siye landiswa ukuya 3 iqela ukuthengisa, 5 iiseti bomashini abicah amancinci kunye neeseti 6 ngomatshini abicah enkulu.
abicah izinto ekrwada kwizinga eliphezulu kubaluleke kakhulu ukwenza imveliso abicah ekumgangatho ophezulu. Siye ikakhulu usebenzise LFGB kunye grade ukutya abicah material.It olukrwada totallynon ezingenabungozi, yaye yavunywa yi-FDA / SGS / LFGB / CE.
Siye ikakhulu usebenzise LFGB kunye grade ukutya abicah material.It olukrwada totallynon ezingenabungozi, yaye yavunywa yi-FDA / SGS / LFGB / CE.
abicah lwaba neengxakana amaso , lwaba neengxakana yemvelo, grade ukutya abicah amaso bulk, teether kakhulu ngenyanga-4 ubudala , abicah baby teether , abicah teether ,